အင်အားအကောင်းဆုံးစက်ဘီးသော့ခတ်ကဘာလဲ? - စက်ဘီးစီး
အဓိက > စက်ဘီးစီး > စက်ဘီးသော့ခလောက် - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်
စက်ဘီးသော့ခလောက် - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းချက်
Kryptonite New York Fahgettaboudit:အပြင်းထန်ဆုံးဦးသော့ခတ်။
Abus Granit X-Plus 54 Mini: ခိုင်ခံ့သောအလင်းရောင်။
Kryptonite နယူးယောက်စံ: ခိုင်မာတဲ့နှင့် Big ။
OnGuard Brute Mini: အားကောင်း။ စျေးပေါသည်။
Kryptonite နယူးယောက် Noose:အပြင်းထန်ဆုံးခရီးဆောင်ကွင်းဆက်သော့ခတ်။
(Drill hums) (hammers) (လူကအော်ဟစ်သည်) - အတွင်းပိုင်းကိုပြန်လှည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်လင်ကွန်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာဒန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့သည်ကျွန်ုပ်ခရစ်စမတ်အတွက်ဝယ်ယူသောကျွန်ုပ်၏အသစ်စက်စက်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဖန်စီသောတောင်ကြီးစက်ဘီးဖြစ်သည်။ လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုဟူသည်လူတိုင်းစဉ်းစားသောအရာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်၏အိမ်အတွက်အိမ်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု SimpliSafe ကပံ့ပိုးသည်။
ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးဆီကိုဒီအကြောင်းပိုပြောမယ်၊ ငါတို့ကဒီစက်ဘီးကိုတတ်နိုင်သလောက်လုံခြုံပြီးကာကွယ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ Amazon ကိုသွားပြီး Amazon မှာသင်ဝယ်နိုင်သမျှအကြီးမားဆုံးဆိုင်ကယ်သော့ခတ် ၅ လက်လေးကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ လက်ထိတ်နဲ့တူတယ်။ ဤစက်ဘီးသော့ခလောက်များသည်မည်မျှကြံ့ခိုင်သနည်း။ လင်ကွန်းသည်သူကျောင်းသို့သွားသောအခါစက်ဘီးပေါ်တွင်မည်သည့်အခက်ခဲဆုံးရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရအောင်။
ဤသည်မှာသူသည်အချိန်အတန်ကြာအသုံးပြုခဲ့သည့်လင်ကွန်းသော့ခလောက်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာတွေကိုယောက်ျားတွေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။ ဒါတွေအားလုံးကဖြတ်နိုင်လားကြည့်ရအောင်။ ဒါဆိုငါ့မှာရှိတာ။ ပြီးတော့အဲဒါကိုအတူတူညှစ်လိုက်မယ်။ (နွေးထွေးသော) - ဒါကရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ - လင်ကွန်းတောင်မှသူ့ကလေးကြွက်သားတွေနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ (ရယ်သံများ) ဒါကရိုးရိုးလေးပါ။ ဒါကအတွင်းပိုင်းကေဘယ်ကြိုးတွေနဲ့ ၀ ယ်ထားတဲ့ပုံမှန်ဆိုင်ကယ်သော့ခတ်တာပဲ။
မင်းကအရမ်းအားနည်းတယ် အကယ်၍ သင်ကစက်ဘီးကိုတကယ်လုံခြုံအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဈေးအသက်သာဆုံးသော့ခလောက်ဝယ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူး။ သွားကြစို့၊ ယခုလန်ဒန်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ဆက်သွားပါ ဆက်လုပ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်သူမကအဲဒါကိုနီးပါးနီးပါးသိတယ် (အော်ဟစ်) - ငါလုပ်ခဲ့တယ်! - မင်းစီမံခဲ့တယ်။ အလွယ်တကူတတိယတန်းမှအeight္ဌမတန်းကျောင်းသူလေး - ဆံပင်တွင် JoJo Siwa ဦး ညွှတ်ထားသောမိန်းကလေးတစ်ဝက် - ကိုပင်ဖြတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းကမင်းရဲ့ကလေးတွေအတွက်သင်ရွေးချယ်တဲ့စက်ဘီးသော့ခတ်လား၊ သင်စျေးကြီးတဲ့စက်ဘီးမှာဒါမှမဟုတ်သင်ကျောင်းကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာစျေးသိပ်မကြီးတဲ့စက်ဘီးစီးရင်တောင်မင်းရဲ့ဘဝရွေးချယ်မှုတွေကိုတကယ်မေးခွန်းထုတ်ပါ။ လန်ဒန်, ကြွက်သားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ - အိုကေ။ - နုတ်ဆက်ပါတယ်။
သော့ခတ်နံပါတ် ၁ ကပျက်နေပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာအခက်ခဲဆုံးသော့ခလောက်တွေကော။ ဤစက်ဘီးသော့ခတ်ခြင်းကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်များတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ငါတို့ကဒီကောင်လေးနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ရတယ်။ - တော်တော်လေးအားကောင်းတယ်
အိုးအားကြီးတယ် (grunts) (ပေါင်) အိုကေ၊ ဒီကောင်လေးအတွက်စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီလို့ငါထင်တယ်။ - ဒါကြောင့်တစ် ဦး ချိုစေခဲ့သလား - ဘာလုပ်ခဲ့လဲ နှစ်ဖက်စလုံးကအနည်းငယ်။ ဒါနည်းနည်းလုပ်ခဲ့တယ်။
စက်ဘီးသော့ခတ်တစ်ခုသည်သတ္တုကိုဤကိရိယာပေါ်တွင်တင်သည်။ (အသံထွက်) (မလိုက်နိုင်သောတေးဂီတ) အိုကေ၊ ငါတို့တခါမှမထိပဲကြမ်းပြင်ပေါ်အက်ကြောင်းကြီးတစ်ခုရခဲ့ပြီ။ ခိုင်ခံ့သောသတ္တု .-- ဒါဟာတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့။
slipgehammer သည်သော့ခတ်ထားသောအလုပ်နှင့်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုသည်။ တစ်ခုခုဖြတ်တောက်သည်၊ စက်ဘီးကိုသုတ်သွားပြီးသင်သွားပါ။ ဒီတော့ထောင့်ကြိတ်စက်ကဒီရူးသွပ်ပြီးမာကျောနေသောမာ့ခ်လော့ခ်ကောင်လေးကိုဖြတ်သွားမှာလား။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) မဟုတ်ပါ။ - သိပ်ကြာကြာမခံခဲ့ဘူး - မင်းရေတွက်ခဲ့တာလား - အမ်၊ ဒါနဲ့တူတယ်၊ စက္ကန့် ၃၀? - ၂၀ စက္ကန့် - ကျယ်လောင်သောအသံ - ကျွန်ုပ်စက်ဘီးကိုထိခိုက်ခဲ့သည် - သင်၏စက်ဘီးကအဆင်ပြေပါသည်။ သင့်စက်ဘီးကအဆင်ပြေပါသည်။ - ဒါကငါတို့လိုစက်ဘီးတစ်စီးကိုချိုးဖောက်ဖို့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးနေသလိုပဲ။
ဤသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် - ကဘာလဲ စက်ဘီးသော့ခတ်။ ။ သင်ယခုမြင်တွေ့ခဲ့သည့်ဆိုင်ကယ်သော့ခတ်မှုများအားလုံးထဲတွင်ဤသည်သည်စျေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၁၃၅ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ - ဟုတ်တယ်။
၎င်းသည်တိုက်တေနီယမ်ဖြစ်သည်။ - ဒီကြီးမားတဲ့ kryptonite လည်ဆွဲထက်ပိုပါတယ်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) - လက်ချောင်းတွေကိုဂရုစိုက်ပါ၊ လင်ကွန်း - ဒါကြည့်ရတာကောင်းတယ်။ (အော်ဟစ်) - Ow! - ဒီ Titan ကိုကြည့်ပါ။
မကောင်းတဲ့ boy.- ကတဆင့်ပေါ့။ ဒါကထူးဆန်းနေတာပဲ။ အတိအကျပေါ်မှာညှပ်အဖြစ်။
ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီမီးပွားလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ - ငါကြားတာကအသံနည်းနည်းပဲနဲ့ကြားတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဒီပလပ်စတစ်အလွှာပေါ်မှာရှိမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမကပဲသန့်ရှင်းတယ်။ - ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်။ - ဒေါ်လာ ၁၃၅ သော့ခတ်မဝယ်ပါနှင့်။
ဒီဟာစျေးအကြီးဆုံးပဲ သိရတာကောင်းတယ် ပျက်ကွက်ခြင်း - နောက်တစ်ခုသို့ - Kryptonite! (ရော့ခ်ဂီတ) မည်သူသည် Kryptonite ကိုသုံးသနည်း။ Batman အခန်းငယ်တွေမှာ Batman က Kryptonite ကို Superman ကိုသုံးတယ်။ Batman က Superman ကိုသုံးတယ်။
လင်ကွန်း, ငါ Batman ရဲ့စက်ဘီးကိုသူက (ရယ်မော) ကလုပ်ခဲ့တယ်ထင်ခဲ့တယ်, ဒါကလမ်းဖြစ်ပျက်ထင်ခဲ့တယ်ခိုးယူ ဒါအလုပ်မလုပ်ပါဘူး မကောင်းပါ။ (chuckles) Kryptonite Evolution.Go! (upbeat music) (hammering) ပလပ်စတစ်ပွင့်သည်။ ၎င်းတွင်ပတ်ပတ်လည်ရှိပလပ်စတစ်များသာတပ်ဆင်ထားသည်၊ သို့သော်သတ္တု၏သမာဓိရှိမှုသည်ယခုအချိန်အထိအားလုံး၏အပြင်းထန်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအတွက်ယခုအချိန်ထိခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။
Link ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာယူမှာလဲ။ - သုံးမိနစ်။ - သုံးမိနစ်လား။ ငါစက္ကန့် 30 ထက်နည်းပြောပါ။ (ရွှင်လန်းသောဂီတ) ချိုးလိုက်၊ ရပ်လိုက်ပါ။
အချိန်ကိုရပ်လိုက်ပါ။ ငါခွဲစိတ်ရုံသာမကဘဲနှစ်ဖက်စလုံးကိုဖြတ်ပြီးအပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါဆိုရင်သင်သွားနိုင်မယ်၊ ပူကောင်းကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ နည်းနည်းပူတယ်ကြည့်ရအောင်။ ဒါဆိုမင်းအဲဒီလိုသွားနိုင်မယ်။ - ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်! - ဆွဲထုတ်လိုက်။ - ဘယ်လောက်ကြာမလဲ - မည်မျှပူသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ငါတပြင်လုံးကိုအရာခုတ်ဖြတ်။
အရမ်းပူတယ်။ ကျွန်မလက်ချောင်းကိုမီးရှို့လိုက်တယ်။ - ဒါကိုတို့ထိလို့ရမလား။ - မကြည့်နဲ့၊ မင်းသိတာပေါ့။ ဒီဟာကိုမီးရှို့လိုက်တယ် ငါအခုခံစားမှုမရှိဘူး
Kryptonite! ဤသည်နယူးယောက် Lock ကို Kryptonite ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ငါ့ကိုမေ့ဖို့ပြောနေတယ် ဒီကောင်လေးကအဆီရှိတယ်၊ ဒါငါဒီမှာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မထင်ဘူး။
ငါလုပ်နိုင်တယ် ငါတောင်မှပတ်ပတ်လည်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ - ကောင်းပြီ၊ ဒီဟာပထမဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ (Popping) (မလိုက်နိုင်သောဂီတ) - ဆိုလိုတာကငါအဲဒီမှာချက်ချင်းပြုတ်ကျသွားသလိုခံစားရတယ်
ဒါကအဆုံးပေါ်ကပလတ်စတစ်အဖုံးပဲ။ ငါတိုးတက်နေပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး၊ အောက်မှာသံမဏိလေးရှိတယ်။ အိုကေ, ဒီတစ်ခု sledgehammer စမ်းသပ်မှုလွန်။
လင်ကွန်း၊ ဘယ်လောက်ကြာမယ်လို့ထင်သလဲ ၁၅ မိနစ် - ၃၆ စက္ကန့်ကြာသည်။ - Wow အားလုံးညာဘက်။ - ၃၆၊ ၃၆-၂၆ စက္ကန့်။ (ရွှင်လန်းသောဂီတသံ) ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းနေသော်လည်းရဲတိုက်နှင့်မဝေးတော့ပါ။
ရဲတိုက်ကလိုမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာကငါနောက်ဆုံးနှစ်ခုလိုနှစ်ဆဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ (မွန်မြတ်သောဂီတ) (hum) သွားကြကုန်အံ့။
ဒါကလှပပြီးအရည်ပျော်ရုံတင်မကဘူးစက်ဘီးစီးလို့ရမလား။ ငါကဒုတိယ (upbeat တေးဂီတ) Boom အများကြီးဖြတ်ခဲ့လိမ့်မယ်, ဒါကငါတို့အစကတည်းကပြုသင့်ပါတယ်။ ငါမတော်တဆတစ်စက္ကန့်ဖြတ်လုပ်လေ၏။ မင်းကအနိုင်ရတယ်
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့သိခဲ့ပြီ၊ ဤနှစ်ခုကဲ့သို့သောသော့ခလောက်အချို့သည် clipper ကဲ့သို့သောအရာများနှင့်လွယ်လွယ်ကူကူချိုးဖျက်နိုင်သည်၊ အချို့သောသူသည်ဤကောင်သို့မဟုတ်ဒီကဲ့သို့သော သူတို့ကပိုလေးတယ်၊ ဒါနည်းနည်းအပေးအယူပဲ။ ထောင့်ကြိတ်စက်သည်မည်သည့်သတ္တုကိုမဆို ဖြတ်၍ မည်သည့်သော့ကိုမဆိုဖြတ်နိုင်သည်။
ငါအရမ်းဒီတစ်ခုကြိုက်တယ် - တကယ့်ကိုအေးမြတယ်။ - အေးဆေးနေတယ် သင်၏မိသားစု၊ အိမ်နှင့်ပစ္စည်းများကိုသင်ကာကွယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် SimpliSafe ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ SimpliSafe သည်သင်၏အိမ်ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာထားရန်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေအရသင့်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးရဲကိုလိုအပ်လျှင်ရဲကိုပို့ပေးမည့်ပညာရှင်များမှအရာအားလုံးကို ၂၄/၇ ကိုစောင့်ကြည့်နေသည်။
၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိသည်။ ငါတိုတောင်းသောကာလ၌က set up ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်တစ်လုံးတည်ဆောက်မည်။ လာမည့်နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောငှားရမ်းထားသောအိမ်ကိုနံရံများ၌ screw များမတင်ပါနှင့်။
မတူညီသောအာရုံခံကိရိယာများ၊ မော်နီတာများအားလုံးသည်တံခါးပေါက် မှလွဲ၍ အခြားစတစ်ကာများနှင့်ဆက်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်တံခါးပေါက်ပေါ်တွင်ငါရိုးရာ doorbell မှရှိပြီးသားဝက်အူပေါက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ယခု SimpliSafe နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့ပေါ်လာသူအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောတံခါးသော့တလုံးရှိသည်၊ သူတို့ကတံခါးပေါက်ကိုနှိပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှိပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (သို့) နေရာများတွင်ရေယိုစိမ့်မှုအတွက်အာရုံခံကိရိယာများရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင်ရှိ၊ မနေကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
SimpliSafe တွင်တရားမျှတပြီးရိုးသားသောစျေးနှုန်းများရှိပြီးစာချုပ်များမရှိ၊ လျှို့ဝှက်ကြေးများမရှိသောကြောင့်သင်သည်သင်၏လုံခြုံရေးစနစ်တွင်ရေရှည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုပါ။ ပြီးတော့သင့်ရဲ့ WiFi ပြတ်တောက်သွားရင် (သို့) မင်းရဲ့စွမ်းအင်ကငါတကယ်နှစ်သက်တဲ့အင်္ဂါရပ်များမှထွက်သွားတဲ့အခါအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ အဓိကအခန်းကတံခါးပေါက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာကိုပြောနေတာကိုပင်မခန်းမမှာကြားနေရသည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလက္ခဏာများနှင့်တူ, ဟေ့, သင့်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်သွား, သင့်တံခါးကိုပိတ်လိုက်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာအိမ်ငှားနေတယ်၊ ​​အိမ်ပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် SimpliSafe ကိုကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုတယ်၊ အဲဒါကငါတို့မိသားစုအတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ။ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက simplisafe.com/whatsinside သို့ ဝင်ရောက်၍ သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖော်ပြချက်ထဲရှိ link ကိုကူးထားပါ။
ဤဆောင်းပါးကိုပံ့ပိုးကူညီသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီနေ့လုံခြုံမှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ ဘာအန္တရာယ်လဲ၊ - ဟုတ်တယ်၊ ဒီတစ်ခုလိုပဲအလုံခြုံဆုံးပဲ။
ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခု၊ ဟုတ်တယ်၊ တော်တော်လုံခြုံတယ် - မည်သည့်စက်ဘီးကမင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်၊ အဆုံး၌သင်မည်သူဝယ်မည်ကိုမှတ်ချက်များ ပေး၍ ပြောပြပါ။ (မင်္ဂလာဆောင်သောတေးဂီတ) ဒါကြောင့်သူခိုးသည်သင်၏တံခါးဝမှာပေါ်လာသည်နှင့်တူသည်။ သင်မြင်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သူ့ကိုလုံးလုံးမြင်နိုင်သည်၊ သူကကောက်ယူသည်။ လင်ကွန်းဖြစ်သည်။ (ထပ်ခါတလဲလဲ doorbell ကွင်း)
အကောင်းဆုံးစက်ဘီးသော့ခတ်2021 ၏: ခိုင်မာတဲ့နှင့်လက်တွေ့
Abus Granit က X-Plus အား 540.အကောင်းဆုံးဘက်စုံဆိုင်ကယ်သော့ခတ်ယနေ့ခေတ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အမျိုးအစားများအားလုံးသည် Abus Granit X Plus 540 ဖြစ်သည်။
Kryptonite Kryptolok အသစ် -U ။
Kryptonite Kryptolok 955 Mini ။
Foldylock Compact ။
Abus Bordo Granit 6500 ။
မင်းရဲ့တောင်တက်စက်ဘီးကိုခိုးတာကငါတို့တောင်မှမည်သည့်တောင်ကြီးသမားမဆိုအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်နိုင်ပြီးသင်ဆိုင်ကယ်ကိုလူသိရှင်ကြားသော့ခတ်လိုက်ရင်တကယ်ကိုသေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့တောင်ကြီးစက်ဘီးသည်မည်မျှအထိအားနည်းချက်များကိုသင့်အားပြတော့မည်နည်း။ သင်၏စက်ဘီးကိုတတ်နိုင်သမျှလုံခြုံစိတ်ချရအောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ (Hissing) (ဓါးကိုဆူစေသည့်ဓါး) သင်၏စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ထားသည့်တိုင်၎င်းသည်လုံခြုံမှုမရှိပါ။
သော့ခတ်တိုင်းသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ကျိုးပဲ့ခြင်း၊ ရိုက်ခြင်း၊ ပြီးတော့သင်ဆိုင်ကယ်ခိုးယူတဲ့သော့ချက်ကသူခိုးကိုဘယ်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာပဲ။ ဒါနဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားကြည့်မယ်။
တကယ်တော့မင်းကိုတစ်ခုခုသက်သေပြဖို့ငါ့စက်ဘီးကိုခိုးယူလိုက်မယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ကျွန်ုပ်သည်အဝါရောင်အင်္ကျီကိုအဘယ်ကြောင့်ဝတ်ဆင်နေသည်ကိုသင်တွေးမိကောင်းတွေးနေလိမ့်မည်၊ ဥပမာ၊ မှောင်မိုက်နေသော၊
ကောင်းပြီ၊ ငါ့သီအိုရီကသူခိုးတွေဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာပဲ။ ပွင့်လင်းတဲ့အကောင်းဆုံးမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့လိုချင်တာမှန်သမျှသွားပြီးယူကြတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါလည်းထပ်တူလုပ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် (quirky music) (whistling) ဒါကြောင့်ကမ်းခြေကဝင်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ငါ့ရဲ့စက်ဘီးကို ၀ ယ်ဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။ 8mm လုံးကြိုး သို့သော်အချက်မှာကျွန်ုပ်သည်စက်ဘီးစီး။ သွားနိုင်သည်ကိုသာပြသရန်ဆန္ဒရှိသည်၊ မည်သူကမျှဘာကိုမှဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပြီးသင်ဟာသူရဲ့ဆူညံသံတွေအများကြီးဘယ်လိုပုံဖော်ထားသလဲဆိုတာကို YouTube ရဲ့ရုပ်သံလိုင်းမှာ Casey Neistat ကိုသင်မြင်ဖူးခဲ့မှာပါ။ ဒါပေမယ့်ငါပြောချင်တာကအများပြည်သူဆိုင်ကယ်စီးတာကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်သင်မှန်အောင်လုပ်ရမယ်။
ဒါကြောင့်စတူဒီယိုကိုပြန်သွားပြီး ecent အရည်အသွေးသော့ခတ်ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာမပြောခင်တကယ့်သော့ခလောက်အချို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။ ယခုတွင်သင်၏စက်ဘီးသည်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်အမှန်တကယ်နှစ်သက်သောအရာဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသင်ဂရုစိုက်ပါ။
ဒီတော့ဆွေမျိုးသားချင်းများအနေဖြင့်၊ သော့ခလောက်အတွက်ပေါင်ရာဂဏန်းအနည်းငယ်သည်သုံးစွဲရန်ငွေများစွာမဟုတ်ပါ။ သင်တို့မူကားသော့ခတ်အပေါ်£ 10 သုံးဖြုန်းနိုင်ဘူး။ ဒါဟာသင့်အပေါ်မှာလုံးဝမူတည်ပါတယ်
ငါတတ်နိုင်သမျှအများဆုံးငွေပမာဏကိုအမြဲတမ်းသုံးပြီးအကောင်းဆုံးသော့ခတ်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းလိုလို၊ သော့ခတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ စျေးကွက်ထဲမှသော့ခလောက်များကို ဖြတ်၍ သူတို့ဘာကောင်းလဲ၊ ဘာမဟုတ်လဲဆိုတာကိုသင်ကြားသည်။ အရင်ဆုံး D-lock ကိုကြည့်ရအောင်။ အခြေခံအားဖြင့် D ရဲ့ profile ကိုစက်ဘီးသော့ခလောက်လို့လူသိများကြပါတယ်။
ဤအထူးကို ABUS မှပြုလုပ်သည်။ မတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှသင်သတိပြုမိစေရန်ဤနေရာတွင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် kryptonite သော့များရှိသည်၊ ABUS သော့ခတ်အချို့ရှိပြီး hiploks အချို့လည်းရှိသည်။
၎င်းတို့တွင်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင် quirks များနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအမျိုးမျိုးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ယင်းသည် granite၊ ၎င်းသည်အလွန်လေးလံသည်။ အဲဒါကအရမ်းကိုကြီးမားတဲ့သော့ခလောက်ပါပဲ သင့်စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသော့ခတ်နိုင်ခြင်း၊
ဒါပေမယ့်ပြtheနာကအရမ်းကိုခက်ခဲပါတယ်။ သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်တပ်ဆင်လိုသည့်သော့ခတ်အမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲသင့်အိတ်ထဲတွင်ထိုအရာကိုသယ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ ဒါကြောင့်ဒီသော့ခတ်မဆိုအမျိုးအစားနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရာဖြစ်ကြ၏။
ဤအချက်သည်အိမ်တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံးအုတ်မြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကကွင်းဆက်သော့ခလောက်များသည်အိမ်တွင် ပို၍ ကောင်းသည်ဟုအမြဲတမ်းပြောသော်လည်း၊ သူတို့နှင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏စက်ဘီးကိုအမြဲတမ်းနေရာတွင်သော့ခတ်ထားလျှင်၊ ဥပမာအားဖြင့်ဘူတာရုံ၊ သင်ခရီးသည်တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်၊ သင့်ရုံး၌သို့မဟုတ်အလုပ်တွင်စက်ဘီးထိန်သိမ်းခြင်းရှိပါက၎င်းသည်ကောင်းပါသည်။ သငျသညျဤအပြင်ပမှထွက်ခွာနိုင်သည်, သူတို့ကချေးခံဖြစ်ကြပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောသော့ခတ်ဆန့်ကျင်ဘာမှမရှိဘူးအဖြစ်။
ပြီးတော့ဒီသော့ခတ်၊ ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသတိပြုမိနိုင်တယ်၊ နှစ်ဖက်စလုံးကိုဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်စတုရန်းပရိုဖိုင်းကအရမ်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့စတုရန်းပုံသဏ္hasာန်ရှိတယ်၊ တစ်ခုတည်းကိုဖြတ်ရုံမကလွတ်လပ်စွာလှည့်နိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ထူထပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုဖြတ်တောက်ပါကသူသည်သူရဲကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သော့ခလောက်သောခိုင်ခံ့သောသော့ခလောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် D-locks များသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည်။
သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားတွေအတွက်ကောင်းတာကသူတို့ဟာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတယ်။ ဒါကတကယ်တော့ခါးပတ်ကလစ်ပါ။ Hiplok ကုမ္ပဏီသည်ခရီးဆောင်သော့ခလောက်များကိုအထူးပြုသည့်အတွက်၎င်းသည်အလွန်အေးမြသောသဘောတရားဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်လုံခြုံသောသော့ခလောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Sold Secure Gold အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်သော့ခတ်ပေါ်တွင်သင်ရရှိနိုင်သောအမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အလွန်လုံခြုံသော shack၊
ဒါ့အပြင်သေးငယ်သောခြေအိတ်အချို့သည်သင်၏စက်ဘီးကိုသင်၏သော့ခတ်ထားသည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ စက်ဘီးပေါ်တွင်အသုံးပြုရန် ပို၍ ခက်ခဲသော်လည်းအမှန်တကယ်သူခိုးများအသုံးချနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာကို ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ cam သော့ခတ်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာလိုမျိုးသော့ခတ်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်သင်စက်ဘီးစီးနိုင်သည်၊ သင်၏စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပိတ်ထားပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သော့ခတ်အသစ်တွေနဲ့တောင်မှကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုသင်ရနိုင်သည်။ ဥပမာ၊ Kryptonite မှဤသည်တွင် extension လည်းရှိသည်။ ဒီတော့ဒါကနည်းနည်းလေးသေးပေမဲ့သင်နည်းနည်းကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာပဲပြတယ်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သေးငယ်။ ပိုမိုကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားတွင်ပိုမိုကြီးမားသောသော့ခတ်ခြင်း၏အားသာချက်ရှိသည်။ သငျသညျကိုလည်း cable ကို extension များနှင့်အတူပါဝငျသောရွေးချယ်စရာအချို့ကိုရ။ ဒါဟာစိတ်ကူးကောင်းတဲ့အတွေးပဲ။
စံပြကမ္ဘာတွင်သင်သည်သင်၏ Mainframe ကိုအရာဝတ္ထုနှင့်ချိတ်ဆက်လိုပြီး၊ သင့်ဘီးကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့ကိုစက်ဘီးမှဖယ်ထုတ်ရန်မလိုပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုပိုပြီးသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်သင်ရရှိထားတဲ့ကာကွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာအလင်းကိုခရီးသွားပြီးအခြေခံအားဖြင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံကိုလိုချင်သူများအတွက်အဖြေအချို့ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ဒီသော့တွေဟာခေါက်သိမ်းထားတဲ့သော့တွေလိုအားလုံးသော့ခလောက်ပါပဲ။ ဒီတော့ဒါကတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်။ အလွန်ပေါ့ပါးပြီးသင်၏အိတ်ကပ်ထဲ၌ပင်သင်၏အိတ်ကပ်ထဲထည့်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးပေးသည်။
ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အလွန်လေးလံသော၊ အလွန်ထိရောက်တဲ့တူညီတဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းလုပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ofာန်ကြောင့်စက်ဘီးသော့ခတ်နိုင်သည့်နေရာတွင်သင်ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ဆောင်းပါးနှင့်နောက်ဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသွားမှာပါ။ တကယ်တော့အရမ်းကိုအရေးကြီးတယ်။ ကျနော်တို့သော့ခတ်သော့ခတ်သို့မသွားမီသင်လည်းသော့ခတ်ထားသောစွမ်းရည်များ၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသောရွေးချယ်စရာများကိုဤနေရာတွင်သိရန်လိုအပ်သည်။ သင်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်မသုံးသင့်ပါ။
ခ။ သင်၏ Carto ၏စက်ဘီးထိန်ချုပ်ထဲ၌သင်၏စက်ဘီးကိုသူနှင့်တွဲထားကြောင်းသေချာပါစေ။ ဤရွေ့ကားအထူးကေဘယ်ကြိုးအခြေခံအားဖြင့်သတ္တု cable ကိုချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြသည်။
ငါတကယ်တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုငါ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာပဲငါ့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်မှာသယ်ဆောင်ထားတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ဆိုင်ကယ်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကော်ဖီသောက်တာကအရမ်းကိုအသုံးဝင်လို့ပါ။ တစ်စက္ကန့်ပစ်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့သောအလင်းသော့ခလောက်သို့မဟုတ် ABUS မှဤသေးငယ်သောပေါင်းစပ်သောသော့ခတ်ခြင်းကိုတောင်အသုံးမပြုပါနှင့်၊ ၎င်းကိုအမှန်တကယ်လုံခြုံသောသော့ခလောက်အဖြစ်အသုံးမပြုပါနှင့်။ ဤရွေ့ကားအနည်းငယ်အဟန့်သကဲ့သို့, သင်စီးနင်းနေစဉ်သင်နှင့်အတူယူအနည်းငယ်ပိုပေမယ့်အဟန့်အဲဒီမှာသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်
အခုတော့ကွင်းဆက်သော့တွေရှိပါတယ်။ ယခုဤအရာများသည်တစ်တန်အလေးချိန်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်အင်အားကြီးမားပြီးခိုင်ခံ့သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ၎င်းတို့တွင်ဖောက်ထွင်းမှုခံနိုင်ရည်ရှိသောသော့ခတ်နိုင်သည့်စနစ်များရှိသည်၊ ၎င်းတို့သည်အက်ဆစ်များနှင့်ကာကွယ်မှုအားလုံးနီးပါးကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သို့သော်ဤကဲ့သို့သော့ခတ်ထားခြင်းအတွက်ပြစ်ဒဏ်မှာတစ်တန်အလေးချိန်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျောပိုးအိတ်ထဲ၌ပင်သူတို့သည်နေရာတစ်နေရာသို့လှည့်လည်သွားလာကြသောအခါသင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရမည်ကိုသေချာစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါအိမ်မှာအသုံးပြုဖို့ကွင်းဆက်သော့ခတ်တာတွေလုပ်ဖို့အကြံပြုချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်အိမ်တစ်ဝက်ရှိတယ်။ ယခုတွင် Hiplok သည်သင်အမှန်တကယ်ခါးပတ်ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်နိုင်သောကွင်းဆက်သော့များကိုပြုလုပ်သည်။ အမျိုးမျိုးသော ratings အတွက်အနား။
၎င်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Sold Secure Silver နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကရွှေစံနှုန်းနဲ့တူအောင်လုပ်ထားတယ်။ ၎င်းသည်ကိရိယာအစုံ၏အလွန်လေးလံသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သော့ခတ်ထားသောယန္တရားကိုယ်တိုင်သည်အမှန်တကယ်အားခါးပတ်ကြိုးကဲ့သို့ဝတ်ဆင်။ သင့်အရာအားသင်၏ခါးပတ်ပတ်လည်တွင်ကပ်နိုင်သည်။
သင်၏စက်ဘီးကိုခါးပတ်ပတ်။ စီးနိုင်သည်။ ဝန်ပိသည်ကြီးမားသောသော့ခတ်သည်။ သင်၏ခါးတွင်တစ်ချိန်ကခိုင်ခံ့သောကွင်းဆက်ရှိသည်ကိုသင်သိထားလျှင်အံ့သြစရာကောင်းသည်။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်သုံးနိုင်သည်ကိုကန့်သတ်မထားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်သော့ခတ်ပါကကွင်းဆက်သော့ခတ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏သော့ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကာကွယ်မှုသည်သင်၏စက်ဘီးကိုသော့ခတ်လိုသည့်နေရာသည်အရေးကြီးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ယခုဤနေရာတွင်လမ်းကြားအနည်းငယ်သို့ဆင်းလာပါကထိုကဲ့သို့သောနေရာသည်ကောင်းသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ သင့်စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ရန်ကောင်းမွန်သော၊ ဤပြwithနာတစ်ခုမှာလမ်းမှားလမ်းလျှောက်နေသောကြောင့်မည်သည့်သူခိုးကိုမဆိုသင်၏သော့ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
မင်းမှာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့သော့ခတ်တစ်ခုရှိရင်သူတို့ကထောင့်ကြိတ်စက်တွေသုံးလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လူအများရှေ့မတက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမကောင်းဘူး။ ဒီတော့ဆိုင်ကယ်ကွင်းဆက်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နေရာများဥပမာအချို့ကိုကြည့်ကြစို့။ လူအများစုကဒီစက်ဘီးကိုသော့ခတ်ရန်ဒီနေရာကိုသုံးကြသည်။ တကယ်တော့ဒါကစက်ဘီးကိုသော့ခတ်ဖို့တကယ်ကောင်းတဲ့နေရာလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။
သင်တို့မူကား၊ ဒါကစက်ဘီးကိုပိတ်ဖို့တကယ်မကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာစက်ဘီးတွေအများကြီးရှိနေလို့ပါ။ ပေါ့ပေါ့ဆဆရှိတဲ့သူခိုးတစ်ယောက်ကသူအနားမှာရပ်ပြီးသင့်စက်ဘီးကိုလက်နဲ့စမ်းကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတာတကယ်လွယ်ကူတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ GMBN နှင့် GMBN Techis တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြားခဲ့ရသောနောက်ဆုံးအရာမှာသူခိုးများနေရာယူမည်မှာကားမောင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၌အိတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးရှိပြီးဤကဲ့သို့သောနေရာများသို့ရောက်သွားသည် သူတို့စက်ဘီးပေါ်ကနေစက်ဘီးဖြတ်တောက်တယ်။
ငါအရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲပွင့်လင်းမှုဟာအကောင်းဆုံးမူဝါဒပဲ။ ဒါသူခိုးတွေလုပ်တာအတိအကျပဲ။ သင်၏စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ရန်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောအခြားဒေသများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ရထားဘူတာသည်ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ခါတလေမင်းကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေတယ် မင်းရထားဘူတာနားမှာမင်းရဲ့စက်ဘီးကိုပိတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အဲဒီလူအုပ်ထဲကတစ်ယောက်က CCTV နားမှာမြင်ရတဲ့နေရာကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ အခြေခံအားဖြင့်အခွင့်အရေးယူသူတိုင်းသည်သင်၏စက်ဘီးကိုမဟုတ်ဘဲသင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်အနည်းဆုံးအခွင့်အလမ်းနည်းစေလိုကြသည်။
အခုငါတို့ရှိသမျှသည်စက်ဘီးကိုမြင်ရပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင်သူတို့သည်သော့ခတ်။ နင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်စက်ဘီးသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသောနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ပိုင်ရှင်၏အမှားမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင်၏စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ထားသည့်ညမှောင်မိုက်ဘဝ၊
အခုငါရောက်နေပြီ၊ ဒါကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်သင့်မှာကောင်းမွန်တဲ့ခိုင်ခံ့တဲ့လက်ရန်းတွေရှိတယ်၊ ဆိုလိုတာကသင့်စက်ဘီးကိုသော့ခတ်နိုင်တဲ့နေရာအတော်များများရှိတယ်။ သင်ရထားလမ်းကိုကျော်ကျော်သော့ခတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ကကောင်းတဲ့နှင့်အနီးကပ်ရနိုင်သည်။
လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ချက်ချင်းလမ်းလျှောက်နေသောကြောင့်လမ်းဘေးတွင်အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေသောကြောင့်သူခိုးသည်ကျွန်ုပ်နောက်ကွယ်မှမြင်နိုင်သကဲ့သို့စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ရန်အတွက်ပြိုင်ဘက်ကောင်းတစ် ဦး လျှောက်လှည့်နေသည်။ စက်ဘီးကိုအပြီးသတ်မည့်ရွေးချယ်စရာများနှင့်စတိုင်များနှင့်နည်းလမ်းများကိုချက်ချင်းကြည့်ကြပါစို့။ ငါဒါကိုဥပမာကောင်းတစ်ခုအဖြစ်သုံးမယ်။
သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုသော့ခတ်နေရာတိုင်း၌သင်ရွေးချယ်သောသော့ခလောက်များနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်သည်စသည်တို့များစွာရှိသည်။ ကောင်းမွန်သောလုံခြုံသောရထားလမ်း၊ ကျွန်ုပ်ရှိသည် D-lock သည်ရထားလမ်းတစ်ဝိုက်တွင်သွားသည်၊ စက်ဘီးနောက်ဘက်ရှိနောက်ဘီးပတ်ပတ်လည်တွင်ရှိသည်။ စက်ဘီးမှမဖယ်ရှားနိုင်သောကြောင့်၎င်းမှာသော့ဖြစ်သည်။
ငါ့မှာအပိုလုံခြုံရေးကေဘယ်လည်းရှိတယ်၊ ဒါက Kryptonite ကေဘယ်လ်၊ ကြိုးတလမ်းနဲ့ရှေ့ဘီးကိုသူ့ဟာသူပြန်ပြီးသော့ခတ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်စက်ဘီးကဒီနေရာမှာတော်တော်လုံခြုံတယ်။ ကျွန်တော့်မှာထိပ်ပေါ်မှာသာထိုင်ပြီးလုံခြုံစွာထိုင်နိုင်တဲ့လက်ကိုင်ဘားတစ်ခုရှိသည်။
မျှော်လင့်ဘယ်သူမှကြောင်းနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည် သင့်တွင်တိုးချဲ့ကြိုးမပါရှိပါက၊ ကြီးမားပြီးရှည်လျားသောသော့ခတ်ထားပါကကျွန်ုပ်သည်သင် ထပ်မံ၍ လုံခြုံရေးအလွှာတစ်ခုထပ်တိုးရန်အသုံးပြုရန်နှစ်သက်သောလှည့်ကွက်လေးတစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာယခုအလုပ်မလုပ်ပါ၊ အချို့သောနေရာများတွင်သင်လုပ်ပါကလူများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤရထားလမ်းသည်၎င်းအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။
စက်ဘီးသည်ရထားလမ်းများပေါ်တွင်တည်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်လမ်းဘေးရှိကားတစ်စီး၏အမြင့်ကိုအထက်တွင်ဆွဲထားပြီးလမ်းဘေးဘက်ခြမ်း၌သင်လိုပဲတစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းကိုလုံခြုံမှုရှိစေရန်သော့ခတ်ထားသည်။ သို့သော်စက်ဘီးသည်လက်ရန်း၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်ရှိနေခြင်းသည်အလုပ်လုပ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲစေသည်။ အလုပ်လုပ်ရန်ခဲယဉ်းပါကစက်ဘီးကိုခိုးယူရန်အချိန်ယူပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ငါတော်တော်များများသုံးတဲ့ကောင်းတဲ့ hack နည်းပဲ။ ယခုဤစက်ဘီးကွင်းသည်အထူးသဖြင့်စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ရန်တည်ဆောက်ထားပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာဖြစ်သည်။ နေရာတော်တော်များများမှာနေရာအများစုထိုင်ခုံတွေ၊ ကော်ဖီ၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်စားစားသောက်ခြင်းနှင့်တူသောသူများစွာရှိသည်။
ဒါကြောင့်သူခိုးအတွက်စက်ဘီးစီးဖို့အချိန်အများကြီးသုံးဖို့မကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခု။ သူကမြင်ဖူးပြီလား၊ ဒီတော့ဒါကကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
သို့သော်စိတ်ထဲထားရမည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ သင်၏သော့ခတ်ထားသည်မှာသိသာထင်ရှားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောသော့ခလောက်ငယ်လေးသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ကားကိုမတော်တဆချော်။ မဖယ်ရှားနိုင်ရန်သင်၏မောင်းနှင်မှုကိုသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ယခုငါ crank အပေါ်ငါ့ဥစ္စာတင်ချင်; J ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သတ္တုတွင်းကိုနောက်ဘက်ရှိအမြှောက်တက်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ခြေနင်းနှင့် crank ပေါ်တွင်စက်ဘီး၏အလေးချိန်ကိုအမှန်တကယ်သယ်ဆောင်ပြီးသော့ခတ်ထားလိုက်ပြီး၎င်းကိုပို့စ်တွင်တင်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လုံခြုံသောစက်ဘီးသည်အားနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ။ သင်ဤအန္တာရာယ်ကိုစွန့်စားလို၊ မလို၊ စက်ဘီးသို့တိုးချဲ့သော့ခလောက်ဖြင့်ဆက်သွယ်လိုလျှင်၊ သင်ဤရာထူးကိုရပြီးရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနေရာသည်ရှိပြီးသားနေရာ၏အခြားတစ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်၏ပုံစံကိုကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောအတုံးဟောင်းဖြစ်ပါက၎င်းကိုသော့ခတ်ပုံနှင့်မည်သို့ကုသပုံကိုကြည့်ပါ။
မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုချန်ထားမလား။ သင်၏ဥစ္စာကိုဖွင့်သောအခါသင်တို့၏ဥစ္စာကိုယူပါ။ စဉ်းစားရကျိုးနပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့စက်ဘီးကအရမ်းဆိုးနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်အသွင်အပြင်အားဖြင့်ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် Kryptonite သော့ခတ်ထားပြီးတိုးချဲ့ကြိုးတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ၎င်းစက်ဘီး၏ပိုင်ရှင်ကစက်ဘီးကိုဂရုစိုက်နေသည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးသင့်ကိုဂရုစိုက်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအမှန်တကယ်ထည့်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သင်တတ်နိုင်သမျှအများဆုံးလုံခြုံရေးအတွက်သွားပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင်ငါ Hiplok ကိုဘာပြproblemsနာမှမရှိဘူး။
ငါ Kryptonite D သော့ကိုသုံးနိုင်တယ်၊ ဝက်တစ်လုံးလုံးကိုသုံးပြီးဒီရူးသွပ်တဲ့ ABUS သော့ကိုသုံးနိုင်တယ်၊ သင်နှင့်ကိုက်ညီသောအရာရှိသည်။ စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ဖို့နေရာတွေကတော့ဒီနေရာဟာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ (Bike wheels purr) ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးမှာသိပ်မထိမိသေးသောအရာတစ်ခုကတော့သူခိုးတွေသော့ခတ်တဲ့နည်းဖြစ်သည်။
Gold Secure သည်အတော်အတန်လုံခြုံမှုရှိသည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အနည်းဆုံးသင်စက်ဘီးကိုအလျင်အမြန်မောင်းထုတ်နိုင်သည့်နေရာအထိ၎င်းသည်သင်၏အချိန်အနည်းငယ်ယူရမည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကတော့သူတို့ကိုအေးခဲစေပြီးတူနှင့်ရိုက်နှက်နိုင်သည်။ သို့သော် The Castle in Shackle ၏အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်သည်ထိုအရာကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်။
အခြားရွေးချယ်စရာ ၃ ခုကျန်ရှိနေသည်။ ပုလင်းသွပ်တစ်ဘူး၊ ပုလင်းသွပ်ကို D-lock အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းတွင်သာအသုံးပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်ကထိုနေရာကိုမရနိုင်ပါ၊ ယင်းသည်သော့ခတ်သောသော့ခတ်သောကြောင့်၊ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး။ U-Lock သို့မဟုတ် D-Lock ပိုကြီးလေ၊ ဤတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားနှင့်သင်ပြproblemsနာပိုများလာနိုင်သည်။ ကျန်တဲ့သူတွေကမူတုံးခုတ်သမားတွေဖြစ်ပြီးတုံးတိုတွေလည်းဒီလိုမျိုးအနီးအနားမှာဘယ်တော့မှသွားမှာမဟုတ်ဘူး။
သူတို့ဟာအကြီးအကျယ်ကြီးမားတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုတကယ်လိုအပ်တာကိုဖြတ်ပစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ Bolt Cutters များသည်ကေဘယ်ကြိုးများကိုသာလုပ်လိမ့်မည်။ သူတို့အရင်လုပ်ခဲ့သလိုပဲ၊ ကြိုးတစ်ချောင်းကိုထောပတ်နည်းနည်းနဲ့တူအောင်လုပ်ပေးတယ်
ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုသုံးတဲ့အခါသတိထားပါ။ နောက်ဆုံးသူက ၀ ယ်တာပေါ့။ ထောင့်ချိုးစက်ထိုးတာပေါ့။ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာထိပ်ပြွန်ပေါ်မှာလုပ်နေတာကဒါကကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။
အကယ်၍ သင်ကလေးလံသောကွင်းဆက်တစ်ခုကဲ့သို့တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါကကွင်းဆက်အားမြေပြင်နှင့်မနီးမဝေးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သငျသညျကတတ်နိုင်သမျှအမြင့်ဆုံးဖြစ်ချင်တယ်။ သူမကြမ်းပြင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခါသူမအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအသုံးပြုခြင်း။
သင်ကသြဇာတွေအများကြီးသုံးရတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလက်တစ်ချောင်းရှိပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကတွန်းထုတ်နေတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စက်ဘီးပေါ်တွင်အမှန်တကယ်သော့ခတ်သောအခါသော့ခတ်သည့်နေရာကိုသာစဉ်းစားပါ။ (ဇာတ်ဆောင်ဂီတ) ကျွန်ုပ်၏စက်ဘီးတွင်သော့ခတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိပေမည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်စီးနေစဉ်အတွင်းကော်ဖီတစ်ခွက်သာသောက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ Garmin စက်ဘီးနှိုးစက်ကိုသတိထားမိပြီး၊ စက်ဘီးပတ်ပတ်လည် fiddled မျှော်လင့်အချက်ပေးချွတ်သွားနှင့်ငါ့ကိုရပ်တန့်မျှော်လင့်ပါတယ်
ခရစ်! သူက e-ဆိုင်ကယ်တောင်မှမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းပြီ၊ ဒါတော်တော်ထိရောက်တယ် app ကိုပိတ်လိုက်ရုံပဲ။
ဒီနေရာမှာအဲဒီမှာသင်သာရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး စွန့်စားမှုယူရန်ရှိသည်။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်စက်ဘီးကိုဇောက်ထိုးလှန်လိုက်ပြီး Ha rd Gear အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ပြီးစက်ဘီးစီးလာတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲ - Chris ပါ။ သင်အိမ်ထောင်ဖက်လုပ်နေတာဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ ဒါက e-ဆိုင်ကယ်ပါ ပြန်ယူလာပါ
ဒီ EMBN ကလူတွေ၊ သူတို့ဟာငါတကယ်ပြောနိုင်တဲ့တောင်ကြီးတောင်ငယ်ကိုလိုက်ရှာနေတယ်။ (Bike wheels whir) ဒီတော့မင်းကဒီ cheeky ကော်ဖီရပ်တန့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါတကယ်တော့ငါ့ရဲ့သံခမောက်လုံးကိုအဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြီ။ တကယ်လို့ငါ့နောက်ကျောဘီးတွေပတ်ပြီးတင်လိုက်ရင်တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုရွေ့လိုက်ရင်ချော်လိုက်တာ၊ အလွန်ဝေး - Ugh! မတရားဘူး၊ ဘုရားသခင်၊ ငါစက်ဘီးတစ်စီးကိုမော်တာနဲ့ဘက်ထရီမလိုချင်ဘူး။ - ရုံ EMB ပြန်သွားသွားအပေါ်! ပြီးတော့ဒါကမင်းအတွက်သင်ခန်းစာပဲ။ ဒါပေမယ့်အလေးအနက်ထားပြောရရင်အဲဒါကိုမသုံးပါနဲ့။ ဤအမှုတို့ကိုမပြုနှင့်။
သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်မှာကောင်းမွန်သောခိုင်မာသောသော့ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏စက်ဘီးကိုစနစ်တကျသော့ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပိတ်ထားသည့်နေရာတွင်မအောင်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြပြီးပါပြီ။ သို့သော်သော့ခလောက်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သင်စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာတွင်သော့ခတ်သည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ မျှော်လင့်ဤသူသည်သင်တို့ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်
တူညီသောသွေးကြောထဲရှိဆောင်းပါးအနည်းငယ်အတွက်၊ အကယ်၍ မင်းကလုံးဝမရှိဟုငါထင်သောမြေကြီးကျောက်ဆူးတစ်ခုကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသင်မြင်လိုပါက၊ သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုရှာဖွေရန်။ CCTV၊ အာမခံ၊ ဤဆောင်းပါးသည်ဖျော်ဖြေမှုကိုမျှော်လင့်မိသည်။
အနည်းဆုံးတော့မျှော်လင့်သင့်အတွက်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်အချို့။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းပေးပြီး subscribe ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသတိပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ ဒါကြောင့်သင်ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို upload တိုင်းသင်သတိပေးချက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါအလုပ်သွားမယ်
နောက်မှတွေ့မယ်။ (Beep) ဒါနဲ့ကျွန်တော်စက်ဘီးကိုဇောက်ထိုးလှန်လိုက်ပြီးဂီယာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ တကယ်တော့တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒီစက်ကိုဝင်ရင်အခြေခံအားဖြင့်ဂီယာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မယ်။ ခရစ်! - Ugh, ဒါမတရား, Doddy! - ဒါက e-bike၊ buddy မဟုတ်ဘူး။ (Angry grunt) (ရယ်သံများ)
Kryptonite U-သော့ခတ်ကေဘယ်လ်ထက်ပိုကောင်းတယ်သော့ခတ်သူတို့လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်နေလို့ပါဖြတ်မှတဆင့်။ Cableသော့ခတ်အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်ဖြတ်မှတဆင့်မှတဆင့် cable ကိုအတော်လေးအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအလယ်တန်းကောင်းတွေပါသော့ခတ်သင့်ဘီးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ရန်၊သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဆိုင်ကယ်။
အမြဲတမ်းသော့ခတ်မင်းစက်ဘီးစီးအဲဒါကိုကျော်မရနိုငျသောအစိုင်အခဲအရာဝတ္ထုရန်။သော့ခတ်မင်းစက်ဘီးစီးမြင့်မားသောခြေလျင်အသွားအလာနှင့်အတူကောင်းစွာ lit litရိယာ၌တည်၏။ မင်းဘာကိုသေချာအောင်လုပ်ပါသော့ခတ်မင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်ဖြတ်မရနိုင်ပါ။သော့ခတ်VALUE ဘောင်အရပထမ၊ နောက်ဘီးနောက်၊ နောက်ဆုံးကားရှေ့တွင်။
စက်ဘီးများသည်အလွန်တောက်ပ။ ပျော်စရာကောင်းသည်၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီးမြို့ပြဒေသများသို့ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းတို့တွင်အကျိုးရှိသည်။ ထပ်ဆောင်းအပိုဆုတစ်ခုလည်းရှိသည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုပိုမို fitter ဖြစ်စေသည်။ သို့သော်သင်သိသည်နှင့်အမျှသူတို့သည်သူခိုးများ၏စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုသူခိုးတွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားချင်တယ်၊ ငါတို့ kryptonite နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာဆိုင်ကယ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုလေ့လာသွားမှာပါ။ မင်းဆိုင်ကယ်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဆိုင်များသို့သွားရန်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများထံလည်ပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်၊ သင်၏စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာတွင်အကောင်းဆုံးနေရာချထားနိုင်မည်၊ စက်ဘီးစီးရန်အတွက်သော့ခလောက်များကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုရန်နှင့်မတူညီသောသော့ခလောက်အမျိုးအစားများကိုသင်လေ့လာပါမည်။ စက်ဘီးသော့ခတ်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကြောင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများသည်သက်ဆိုင်ရာအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်သော့ခတ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်မသိမီ ပို၍ ကြီးမားသည်မှာယခုထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်မဟုတ်။ ရရှိနိုင်သောသော့ခလောက်အမျိုးမျိုးတွင် ike သော့ခလောက်များသည်သူတို့၏မတည်ငြိမ်မှုအတွက်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည် y ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးပဲရခဲ့ပေမယ့်သင်အမှတ်ရနေတယ်၊ ​​ဥပမာ၊ kryptonite သည်၎င်း၏သော့များကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားခွဲခြားထားသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာသော့ခလောက် ၅ ခုမှစမည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ငါးခုထက်မပိုသောအချက်များကိုသာမန်အားဖြင့်ကျေးလက်ဒေသရှိကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတွင်ရပ်တန့်နေစဉ်သို့မဟုတ်တန်ပြန်ရန်အတွက်သာအနည်းငယ်သောတန်ဘိုးအတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်သာအသုံးပြုသည်။ သင်ရထားနဲ့တစ်ခုခုသွားလာနေရင်သင့်ဆိုင်ကယ်
သင်သိသင့်သောပထမဆုံးသော့ခလောက်မှာ D သော့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကျေးလက်ဒေသများတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသောဤရိုးရှင်းသော D-lock မှသည်ကျိန်ခြင်းအပြီးတွင် Gotham မြို့အကြောင်းစဉ်းစားခြင်းမှသည်ကျော်ကြားသောလူသိများသည့်မြို့ကြီးပြကြီးinရိယာရှိ Gotham မြို့ကိုအပြီးသတ် D-lock အထိကျယ်ပြန့်သော D-lock အထိဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ D-locks သည်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အသန်ဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးစက်ဘီးသော့ခလောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ခိုင်ခံ့မှုနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အလေးချိန်၊ အလေးချိန်နှင့်အလေးချိန်တို့အပြင်အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းကွာခြားသည်။ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းတွင်ထင်ဟပ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာသည်ပိုမိုပေါ့ပါး။ ကြာရှည်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသောဒီ D-lock များသည်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည့်အတွက်ဤကဲ့သို့သောအသေးများနှင့်ဤကဲ့သို့သောပိုကြီးသည့်ပစ္စည်းများသည်သင်၏စက်ဘီးကိုမရွေ့မပြောင်းနိုင်သောအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၏စက်ဘီးဖြင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဝေးမှစက်ဘီးသို့မဟုတ်နောက်ကောက်များကဲ့သို့သောစက်ဘီး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ဘုံနည်းဗျူဟာကိုသုံးခြင်းနှင့်စက်ဘီး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုလုံခြုံစေရန်အခြားသော့ခတ်ကဲ့သို့သောအခြားသော့ခတ်ခြင်းနှင့်အတူ D-lock ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရီးသွားခြင်းနှင့်ကျောပိုးအိတ်တွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်ဟုဘီးနှင့်အခြားဆိုင်ကယ်များတွင်ကြော်ငြာသော့ခလောက်များထက်သင့်စက်ဘီးတွင်ရှိသည့်အခြားအရာများရှိသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောသော့ခတ်သောယန္တရားများဖြင့်လာရောက်ခြင်းကြောင့်ယခုသူတို့သည်လုံခြုံမှုနည်းလာသည်။ ပေါင်းစပ်သော့ခလောက်များသို့မဟုတ်သော့ခလောက်များသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောသော့ခလောက်ဖြင့်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသည့်ကွင်းများရှိသူများ။
များသောအားဖြင့် D-Lock cable သော့များကသူခိုးကိုတားဆီးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် D-Lock နှင့် bolt cutters များထက် ပို၍ လုံခြုံမှုရှိသည်။ cable lock ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာများသောအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောသံမဏိကြိုးများဖြစ်တတ်ပြီး၊ အပြင်ဘက်တွင်အဂတိလိုက်စားမှုကိုကာကွယ်ရန်အပြင်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွင်းဆက်သော့များရှိသည်။ သင်၌ကောင်းသောအရာများရှိသည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင်မတူညီသောသော့ခတ်ခြင်းယန္တရားများရှိသည်။ ဤတစ်ခုတွင်ပေါင်းစပ်သော့ခတ်ထားသော်လည်းသော့များသာရှိသူများရှိပြီး၎င်းတို့သည်မတူညီသောပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ cable lock သော်လည်း D-lock ထက်အားနည်းသည်။ D-lock အနေဖြင့်သင်၏ဆိုင်ကယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကို D-lock ကဲ့သို့သောကြောင့်ကွင်းဆက်များအပြင်ဘက်နှင့်လုံခြုံရေးကြောင့် D-lock ထက်ပိုကောင်းသောအားသာချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ငြိမ်ပြီးတင်းကျပ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ရှိအခြားစက်ဘီးရဲတိုက်များတွင်အသုံးပြုရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည့်အခြားသူများထက် ပို၍ အသုံးများသည်မှာယခုကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာခေါက်သော့ခလောက်ဖြစ်သည်။ ခေါက်သိမ်းထားသောသော့ခလောက်များသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် D-lock ထက်သင်အိတ်ဆောင်နေရာတွင်နေရာအနည်းငယ်ယူရန်လိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့်ခေါက်။ ၎င်းသည်သင်၏စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိနေသည်နှင့်မည်သည့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ သင်သော့ခတ်ထားသောစက်ဘီးကို၎င်းတို့သည်ကေဘယ်လ်တစ်ခုထက်ပိုလုံခြုံသည်ဟုယူဆကြသော်လည်း၎င်းသည်ယုံအားရထိုက်သော D-lock ထက် ပို၍ လုံခြုံမှုနည်းသည်ဟုမှတ်ယူကြသည် သော့ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပိုခိုင်ခံ့တဲ့သံမဏိခြေကုပ်နှစ်ဆသော့ခလောက်များနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဖောက်ထွင်း ၀ င်သောသော့ခတ်စည်များနှင့်သော့ခတ်ထားသည့်သေးငယ်တဲ့အပေါက်တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤအရာများသည်တစ်စုံတစ်ယောက်အား brute force locks နှင့်သို့မဟုတ်အောက်ခြေတွင် crack ရန်အခက်တွေ့စေသည် ၎င်းတို့သည်သော့ခလောက်များသည်အလုပ်မဖြစ်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်သံမဏိများကို အသုံးပြု၍ ကျွမ်းကျင်သောသူခိုးသို့မဟုတ်အင်အားကြီးမားခြင်းနှင့်သင်အသုံးပြုသောသော့ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သော့ခလောက်သေးငယ်သည့်သော့ခတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်၌စက်ဘီးအမျိုးအစားနှင့်သင်မည်မျှကြာအောင်သော့ခတ်သွားမည်ကိုသတိပြုပါ။ ဤအချက်များအားလုံးသည်သင်၏စက်ဘီးစီးခြင်းအခိုးခံရခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အန္တရာယ်အဆင့်ကိုတိုးစေသည်။ နေရာဒေသသည်အချို့သောareasရိယာများရှိနိုင်သည့်နေရာသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်း - မီးရထားဘူတာများကဲ့သို့သောနေရာများသို့သွားပါ၊ ဖြစ်နိုင်ပါကသင်၏စက်ဘီးကိုဤကဲ့သို့သောဆိတ်ငြိမ်သောလမ်းများပေါ်တွင်ရပ်ထားရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူနည်းပါးသောနေရာတွင်သူခိုးသည်စက်ဘီးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်ပိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။
ထို့အပြင်ကဖေးများ၌ထိုင်ခြင်း (သို့) အလုပ်များသောလမ်းလျှောက်ခြင်းစသည့်အခြားအရာများကိုစဉ်းစားပါ။ ထို့ပြင်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်စက်ဘီးစီးရန်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာများကိုစဉ်းစားပါ။ ကျွန်ုပ်၏စက်ဘီးကိုဒီဘက်ခြမ်းတွင်မဟုတ်ဘဲနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောလမ်းတစ်ခုပေါ်မှလမ်းပေါ်ထွက်ပြေးထွက်သောအခြားဘက်ခြမ်းတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်နှင့်တွဲပါလိမ့်မည်။ ဤနေရာ၌လုံခြုံရေးအစောင့်လည်းရှိပါသည်။ တစ်ချက်အနေဖြင့်သူခိုးသည်စက်ဘီးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေလျှင်သူသည်သူမဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောနေရာကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ သိမ်မွေ့သောအသေးစိတ်အချက်ကိုငါသော့ခတ်ထားသောနေရာ၌အမှန်တကယ်သော့ကိုထည့်လိုက်သည်နှင့်ဤဘက်ခြမ်းတွင်အသေးစိတ်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်ကြိုးစားပြီးစက်ဘီးကို ဖြတ်၍ မဖြတ်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုနှင့်အမြဲတမ်းရွေးရန်ရွေးချယ်ပါကသော့ခတ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲစေသည်။ ဆိုလိုတာကတော့သိသာထင်ရှားနေပုံရပေမယ့်သစ်သားတိုင်တစ်ခုကကောင်းပြီးလုံခြုံတယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လွှတစ်ချောင်းကဒီအလုပ်ကိုတိုစေလိမ့်မယ်
သင့်တွင်ယိုစီးမှုပိုက်တစ်ခုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ အချို့သောလူများကတစ်ခါတစ်ရံစက်ဘီးစီး။ ပိုက်မှရေပိုက်များဖြတ်ထုတ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူဖြတ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါကသင်အမှန်တကယ်အလိုရှိပါကနံရံပေါ်ကနေဖြုတ်ပစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အတိတ်လမ်းလျှောက်။ ဝင်လာသူများအားထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဒီနေရာတွင်သွပ်သတ္တုနှင့်ထောင့်ကြိတ်စက်သို့မဟုတ်လွှမှပြုလုပ်သောဂန္တ ၀ င်ဂျော်ဂျီယာရထားလမ်းများလည်းလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖြတ်ကျော်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသည် d- သော့ခတ်ကောင်းနှင့်ရရှိသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏စက်ဘီးကိုသော့ခတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့်ငါဘယ်လိုသုံးပါလိမ့်မယ်ပြသသွားမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ပိုမိုလုံခြုံစေရန်နည်းစနစ်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ လှပသောလမ်းဖြစ်သည်။ သင်မဟုတ်ပါ။ သိတဲ့အတိုင်း၊ လူသွားလူလာတွေအများကြီးအပါအ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာအရိပ်လက္ခဏာသိပ်မများပါဘူး၊ ကောင်းစွာထွန်းလင်းတောက်ပတယ်။ မင်းအဖတွေအများကြီးသိတယ်။ ဒီမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီမှာအထူးစက်ဘီးရထားလမ်းတွေရှိတယ်။ စက်ဘီးတစ်စီးနှင့်သူတို့ဖြတ်နိုင်သည့်သစ်ပင်အငုတ်ကဲ့သို့သောစက်ဘီးကို၎င်းမှဖယ်ထုတ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဘီးကိုအဖိုးတန်မှုအရှိန်အရ၎င်း၏စက်ဘီးကိုသက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏တန်ဖိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရမည်ကိုမည်သူမျှမစီးနိုင်သည်ကိုသိသည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနောက်ဘက်နောက်ဘီးနောက်နောက်နောက်ဘီးပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုလုံခြုံစေလိုလျှင်ဖြစ်နိုင်လျှင် D-lock ဖြင့်ဘောင်နှင့်နောက်ဘီးဘီးနှစ်ခုလုံးလုံခြုံမှုရှိစေရန် D-lock ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဘီးနှင့်ဘောင်ကိုတင်ထားသည်။ ရှေ့ဘီးကိုသေချာစေရန်ဒုတိယအချက်အဖြစ်ကေဘယ်သော့ခတ်ခြင်းကိုအသုံးပြုမည်။ ၎င်းကို D-Lock bracket မှတစ်ဆင့် frame မှတဆင့်၊ ရှေ့ဘီးကိုဖြတ်ပြီး d-locklike sonext ထဲသို့ပြန်သွားပါက d-lockback ၏အဆုံးကိုထားနိုင်ပြီးဖြစ်နိုင်လျှင်၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်သော့ခတ်ထားသောယန္တရားကိုနေရာချပါ။ အလုပ်ပိုခက်ခဲအောင် d-lock ကိုချထားပါ သူတို့က D-lock ကိုဖွင့်နိုင်ပြီးသင်ဆိုင်ကယ်နှင့်ဆိုင်သောနေရာတွင်နေရာအနည်းငယ်သာလိုချင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောသေးငယ်။ ပိုမိုကျစ်လစ်သော D-lock များသည်ဤအခြေအနေများတွင်အသုံးဝင်သည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးသိသာထင်ရှားပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့တော်တော်များများသိသာထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတွေကဒီစက်ဘီးကိုတကယ့်အစိုင်အခဲအရာ ၀ တ္ထုတစ်ခုအဖြစ်ရွေ့လျားရုံမျှမကရွေ့လျားနိုင်ပြီးဘယ်နေရာကိုမှမသွားဘူး၊ စက်ဘီးသည်လုံးဝအတိအကျမဟုတ်ပါ။ ဂန္ထဝင်စံနမူနာကိုပြသသည်။ ထိုကဲ့သို့သော bollard အမျိုးအစားကဲ့သို့သောအရာများသည်တာဝါတိုင်များဖြစ်သည်။ သင်ကယင်းကိုသော့ခတ်ထားရုံဖြင့်၎င်းကိုချက်ချင်းမြှင့်တင်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်စက်ဘီးပေါ်မှဆင်းလာပြီ။ ယခုသင်မြင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကေဘယ်ကြိုးသို့မဟုတ်ကေဘယ်လ်တစ်ခုအစားရှေ့ဘီး၏ရှေ့ဘီးကိုလုံခြုံစေရန်အခြားသော့ခတ်အမျိုးအစားကို သုံး၍ d-lock သို့မဟုတ်ကွင်းဆက်သော့ခတ်သို့မဟုတ်သင်လိုချင်သည့်အရာဖြစ်နိုင်သည်။ အထက်သို့သော့ခတ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းအားလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ထိုအရာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ယင်းသို့ချထားခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသော့ခတ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သင်သူခိုးများထံဆွဲဆောင်မှုနည်းစေပြီးနေ့စဉ်စက်ဘီးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သော့ခတ်ထားလျှင်လည်းဥပမာ၊
ဥပမာအလုပ်ခွင်၌စက်ဘီးအိတ်ထဲတွင်သော့ခလောက်များကိုသင်အလွယ်တကူသော့ခတ်နိုင်သည်၊ သို့အတွက်ဤကဲ့သို့သောသော့ခလောက်များသည်အလွန်လုံခြုံသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအချိန်တိုင်းဝိုင်းရံထားရန်မလိုပါ။ ၄ င်းတို့တွင်ရေ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်သော့ခတ်ခြင်းကြောင့်ရာသီဥတုကြောင့်ပျက်စီးခြင်းများကိုကာကွယ်နိုင်ရန်သင့်အားလျှောစီးနိုင်သည့်အထူးအဖုံးများရှိသည်။ ၎င်းသည်ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏စွမ်းအားအဆင့်၏ဒုတိယအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စံချိန်စံညွှန်းများပေါ်တွင်အခြေခံသော့ခတ်အကဲဖြတ်ကြောင်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့, ဒီမကြာခဏအာမခံကအသိအမှတ်ပြုတစ်ခုတည်းသောအကဲဖြတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်၊ မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုဘယ်လိုပိတ်ချင်တယ်၊ မင်းသိမ်းချင်တဲ့သော့တွေ၊ ဘယ်လောက်လုံခြုံစိတ်ချရမယ်၊ ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးနှင့်အတူ၊ အကယ်၍ သင်သွားလျှင်၊ သင့်စက်ဘီးကိုအများပြည်သူပိုင်နေရာတွင်သော့ခတ်မထားမီသင့်စက်ဘီးကိုစနစ်တကျလုံခြုံစွာထားရန်သင့်လမ်းတွင်ဥပမာ၊ သင့်စက်ဘီးတွင်အလွန်စျေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။
ဘီးများနှင့်ဘောင်များကိုလုံခြုံစွာထားရှိခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။ သူခိုးများကသင်၏စက်ဘီးမှအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးဘီးများနှင့်ဘောင်များဖြင့်ချန်ထားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းသည်သင်၏စက်ဘီးကိုသူခိုးများအားတတ်နိုင်သမျှဆွဲဆောင်ရန်နှင့်သိမ်းထားရန်ကြိုးစားရန်ဖြစ်သည် သတိထားရမည့်အချက်မှာခုံးခဲများသည်အမဲလိုက်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်၊ သင်သည်ခြင်္သေ့များနှင့်အနိုင်ယူရန်မလိုပါ၊ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုရန်စက်ဘီးတစ်စီးကိုရွေးချယ်သောအခါအစိုင်အခဲအနည်းဆုံးနှင့်အခြားအစွန်အဖျားတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ တန်ဖိုးမကြီးသောစက်ဘီးတစ်စီးပိုင်ဆိုင်ရန်အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်တစ်စီးမှပန်းထိုးသို့အရောက်သွားနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ Antelope Analogy သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အရသာအရှိဆုံးဖြစ်ရန်မလိုလားပါ။ အန္တာရယ်လ်၏အသွင်အပြင်သည်အလွန်တရာမှိန်မှိန်လွန်းလှသည်မဟုတ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးကိုသင်နှစ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့ပြီဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဤအကြံပေးချက်များဖြင့်သင်၏စက်ဘီးကိုပိုမိုဘေးကင်းစေပြီးအဖြူရောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်တွင်လက်မရှိသူများနှင့်အနာဂတ်တွင်သင်ကြည့်ရှုလိုသည့်ဆောင်းပါးများနှင့်သင်၏ဆိုင်ကယ်လုံခြုံရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာမှတ်တိုင်များကိုမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
လူအများစုကဆိုင်ကယ်၊မော်တော်ဆိုင်ကယ်သူခိုးတွေသော့ခတ်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းစေရန်အတွက်သာအလုပ်လုပ်သည်သော့ခတ်- သင်လုပ်နိုင်တဲ့ကြင်နာရွေးဘောပင်တစ်ချောင်းနှင့် ကိစ္စအများစုတွင်အမှန်တကယ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ယန္တရားကိုဖြတ်တောက်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူသည်သော့ခတ်။ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2018
ကရင်ပရွန်နီနယူးဦးKryptoLok စံ - ဤဦး-သော့ခတ်New- ကဲ့သို့ disc-detainer ယန္တရားကိုအသုံးပြုသည်။ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ယခုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးခြင်းနှင့်တူညီသောနှစ်ဆထိန်းချုပ်မှုပုံစံနှင့်အတူလာသည်။ (ဗားရှင်းငါတို့စမ်းသပ်ပြီးမ။ ) သို့သော်ဤနှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြissueနာသော့ခတ်မပြောင်းလဲပါသော့ခတ်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ကတဆင့်။2021 မေလ 26,
အကောင်းဆုံးကွင်းဆက်သည်ရှစ်ဆagonသို့မဟုတ် Square Links များရှိသည်
Hexagonal နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလေးလံသောမာကျောသောသံမဏိကွင်းဆက်သည်သူခိုးတိုင်းကိုသူနှင့်အနှောင့်အယှက်ပေးသည်မူလီရှုး။ ဆx္ဌဂံချိတ်ဆက်မှုများ (သို့မဟုတ်စတုရန်း (သို့) trapezoidal) အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါသော့ခတ်ချုပ်ကိုင်ထားရန်။ဖေဖော်ဝါရီ 4, 2021
တချို့ကဖုန်သို့မဟုတ်ပြွန်တိပ်ခွေလုပ်ကြည့်ရတာလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုလူလိမ်။ ဘို့စက်ဘီးကာကွယ်ရေးတိပ်မင်းရဲ့ထိုင်ခုံခုံ၊ လက်ကိုင်နှင့်နေရာအမျိုးမျိုးမင်းရဲ့ကိုယ်သင့်စက်ဘီးကိုလုပ်ပါအစိတ်အပိုင်းများဝတ်ဆင်နှင့်ညစ်ကြည့်ရှုပါ။မတ်လ 5, 2021
သော့ခတ်အလွယ်တကူလုပ်လိမ့်မယ်ဖြတ်ကေဘယ်လ်မှတဆင့်သော့ခတ်chancers များကိုတားဆီးရန်အတွက် cable extension ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ဒါဆိုမင်းလိုချင်ရင်ဆိုင်ကယ်သော့ခတ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ရန်ပွဲတက်ထားရန်သော့ခတ်ခိုင်ခံ့သောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရာတစ်ခုနှင့်အထူဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုရယူပါ။